နှစ်တရာကျော် တဲ့နော်ဝေ က ဖိုး “တိုင်ဆို (၁)” Norway’s Tysso I – XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » နှစ်တရာကျော် တဲ့နော်ဝေ က ဖိုး “တိုင်ဆို (၁)” Norway’s Tysso I – XIII
နှစ်တရာကျော် တဲ့နော်ဝေ က ဖိုး “တိုင်ဆို (၁)” Norway’s Tysso I – XIII
Posted by Kyaemon on Jul 22, 2012 in Education, Entertainment, Environment, Photography, Style & Beauty, Travel |3comments
Museum of Hydro Power and Industry Norway scenery Norway Tysso I
နော်ဝေ က ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် စက်ရုံ “တိုင်ဆို (၁)” Tysso I ဟာ
၁၉၀၈ ကထဲက ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာ၊
နှစ်ပေါင်း (၁၀၄) နှစ် ရှိ ပြီမို့ သက်ကြီးရွယ်အို ဖိုးဖိုး “တိုင်ဆို” လို့ခေါ်နိုင်တာပါ၊
နောင်လာနောင်သား အတွက် အမှတ်တရ ရအောင်၊
အမွေအနစ် အဖြစ်ခံယူရအောင် ” ပြတိုက် ” လို
ပြောင်းလဲ ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံ ထားတာ၊
၎င်းပြင်၊ တဆင့်တက်ပြီး UNESCO World Heritage Site
အမလေးဗျ၊ ကြောက်တတ်သူ အောက်ကိုမကြည့်နဲ့၊ အသဲယားစရာကြီး၊
ကျန်ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ဘို့ အောက်ပါ link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
Opplev Odda | Tysso Via Ferrata –ajourney through history
TyssoViaFerrata – in the Footsteps of the ’Rallar’
We’re inviting you toaspectacular experience in the mountains of Tyssedal!
You will be able to experience first-hand the everyday life of the navvies who built the power station. When they secured mountain constructions, casted concrete foundations, hand-chiselled bricks, and installed the water pipes. It’s an introduction to Norwegian history, while surrounded by beautiful nature.
The hike starts at the Norwegian Museum of Hydro Power and Industry (NVIM) and the Tysso 1 power station. We’ll then follow the maintenance tram along the pipeline to the dam watcher’s house at the top of the mountain, Lilletopp.
Movie Norge Rundt NRK
If you’re in normal good shape and over 15 years of age, OpplevOdda would like to invite you on this trip.
Price per person: 750NOK, including NVIM ticket
(သတ်တိခဲ အာဃအမျိုးသမီး လူစွမ်းကောင်း)
ရှူမျှော်ခင်းလှလှ အကြားမှာဘဲ ကွန်ကရစ် အခြေခံ ကြမ်းခင်းတွေ၊
တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပိုက်လုံးကြီးတာတွေ ကို
တောင်ထိပ်က Lilletopp ရေကာတာ အစောင့် ရုံးအထိ
၁၅ နှစ်အထက်ရှိပြီး ကျန်းမာတောင့်တင်း ရမယ်၊
သုံးလေးနာရီကြာမယ်၊ တဦး ကို နော်ဝေ ကရိုနာ NOK ၇၅ဝ (US $ ၁၂၅ ခန့်)
အနဲဆုံး ၄ ဦးတတွဲ (အဖွဲ့လိုက်) လက်ခံတာ၊
ပြတိုက်ကြည့်ဘို့ လမ်းပြသူ အပါဆိုရင်
တဦးကို နော်ဝေ ကရိုနာ NOK ၁၅၀ဝ (US $ ၂၅၀)
(ဂေဇက်ရွာသား အတွက် အခမဲ့ ပေါ့ ဗျာ၊ဒိထက်စုံအောင်လဲပြမှာပါ)
NVIM – Om museet
The only power plant in Norway that is protected by the Director General of Historic Monuments.
The Tysso I power plant was constructed between 1906 and 1918, and was one of the largest high pressure power plants in the world. Tysso I became the life nerve of the industrial communities Odda and Tyssedal.
The plant is very well preserved, and is one of the foremost technical and industrial heritage sites in Norway today. the power plant tells the story of the hydro power development and of the growth of the modern Norway.
Tyssedal power plant, Tysso I, was placed on the protected list by the Director General of Historic Monuments on the 15th of May 2000.
The power station: Exterior, all the stages of building in the period 1908-1988. interior, turbine hall, control room, pipe cellar and additional production equipment in the turbine hall, control room and pipe cellar.
The workshop building – exterior.
Lilletopp: The distribution pool, buildings; exterior, interior and equipment. The watchman’s home exterior and interior.
The intake pool Vetlevann; valvehouse by the intakepool – exterior and interior.
It is important to the museum that the plant is protected, and also revitalised. Extensive renovation work is being done; the power station as well as the many buildings and constructs at Lilletopp are being renovated.
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စနိုင်ဖို့ တရုတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ကချင်ဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ ပြောဆို
တရုတ်အစိုးရပိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (CPI) ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ ယာယီရပ်ဆိ်ုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်း ပြန်သက်ဝင်လှုပ်ရှားဖို့ နိုင်ငံတကာ ရေကာတာကြီးများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း ICOLD (အိုင်ကိုးဒ်) အကူအညီရယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ KDNG ကချင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့က ဒီနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းပြန်လည် စတင်နိုင်ဖို့ အိုင်ကိုးဒ်အဖွဲ့ကို တရုတ် (CPI) က ချဉ်းကပ်တာလို့ KDNG ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တာဝန်ခံ ဆိုင်းမိုင်က ပြောပါတယ်။
” ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာကို Third Party အနေနဲ့ လေ့လာဖို့ ပေါ့နော်။ ဒီ ICOLD အိုင်ကိုးဒ်ပေါ့နော်၊ ဒီအဖွဲ့ကို သူတို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ မြန်မာအစိုးရကနေ တောင်းဆိုလို့ လုပ်တယ်လို့ သူတို့ပြောထားတယ်”
CPI ပြောသလို မြန်မာအစိုးရက ခုလို တိုက်တွန်းတာ ရှိမရှိ သီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ ပြင်သစ် အခြေစိုက် အိုင်ကိုးအဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၉ဝ ရှိပြီး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ဒီအဖွဲ့ဟာ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အဓိက စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ အိုင်ကိုးလ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အစိုးရပိုင် (CPI) ဟာ အိုင်ကိုးနဲ့ အတော်လေးနီးစပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (CPI) နဲ့ မူးယစ်ရာဇာ လောစစ်ဟန်ရဲ့သား ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ပိုင် အေရှားလ်ဝေါလ်ကုမ္ပဏီက အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းဟာ လုံးဝ လုံခြုံစိတ်ချရပြီိး အကျိုးကျေးဇူး ရှိတဲ့အကြောင်း သက်သေထူဖို့ အိုင်ကိုးလ်ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေကာတာကို သီးခြား အလွတ်သဘော စစ်ဆေးနေတယ်လို့ တရုတ်သတင်းဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိတယ်လို့လည်း KDNG က ပြောပါတယ်။
လုံခြုံစိတ်ချရမှု ၁၀၀% ရှိမယ့် ရေကာတာမျိုးကို
usa နဲ့ china ပေါင်းလုပ်ခိုင်းဗျာ
မဆောက်ခင် တရုတ်နဲ့ သဘောတူညီချက် အရင်ယူရမှာက
ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာအားလုံးကို တရုတ်နိုင်ငံက လက်ခံရမယ်
ဒါမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးရောင်းမယ်
အေးလကွာ…တရုတ်နဲ့ရိုဟင်ဂျာ စပ်လိုက်ရင် ထွက်လာမည့် ရုတ်ဟင်ဂျာမလေးတွေဆို မဂိုမတွေ အတိုင်းနေမှာ…။ လုပ်မယ်ဆိုလည်း မြန်မြန်လုပ်၊ ဖွဲနုတဆုပ် ငါနိုင်သေးချိန်ထိတော့ မှီနိုင်ကောင်းပါရဲ့။ နှာတံစင်းစင်း အသားအရည် ဖြူဝင်းဥပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ဂလု ဂလု ဇီဝံ ဝီစံပေါတကား…။